विभागले अघिल्लो महीना शिकारका लागि पेशेवर शिकारी अनुज्ञापत्र प्राप्त कम्पनीबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको थियो ।
दश नाउर र छ झारलको कोटा रहे पनि शिकारको माग कम आएको विभागले जनाएको छ । शिकार कम्पनीबीच विद्युतीय बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा नभएपछि यसपालि राजश्व दर पनि घटेको छ ।
शिकार कम्पनीले एउटा नाउर शिकारको रु. एक लाख ९० हजार राजश्व तिरेको व्यवस्थापन शाखाका सहायक व्यवस्थापक अधिकृत सन्तोष भगतले बताए । झारल शिकारको राजश्व त्योभन्दा अझै कम छ ।
‘यस याममा शिकारको माग कम आयो, प्रतिस्पर्धा नहुँदा राजश्व दर पनि घट्यो’, उनले भने । अघिल्लो शिकार याम (फागुन–वैशाख)मा एउटा नाउर शिकारको राजश्व रु तेह्र लाख ५१ हजार र झारल शिकारको रु. तेह्र लाख ५० हजार राजश्व पुगेको थियो ।
गत वर्षको यही शिकार याम (असोज–मङ्सिर) मा पनि नाउर शिकारको राजश्व रु बाह्र लाख पाँच हजार र झारलको रु. नौ लाख २० हजार थियो ।
यस यामका लागि बोलपत्र प्रक्रियाबाट छानिएका शिकार कम्पनीले पेशेवर विदेशी शिकारीलाई आरक्षमा पठाउने तयारी गरेका छन् । आरक्ष कार्यालयका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरस्वती सापकोटाले दुई सातापछि पहिलो शिकार टोली ढोरपाटन आउने बताए ।
‘मङ्सिरको अन्तिमसम्ममै शिकार खुला रहन्छ’, उनले भने । शिकार कम्पनी ट्रयाक एण्ड ट्रेल्र्स, नेपाल वाइल्ड लाइफ सफारिज, नेपाल वाइल्ड लाइफ एडभन्चर, हिमालयन अउटफिटर, हिमालयन सफारिजल र ग्लोबल सफारिजले ढोरपाटनमा शिकार खेलाउँदै आएका छन् ।
बोलपत्रबाट छानिएका कम्पनीले अनुमति पाएअनुसार नाउर र झारलको शिकार गराउने गरेका छन् । व्यवस्थित शिकारका लागि आरक्षभित्र छ ‘ब्लक’ तोकिएको छ । यहाँ फागुने, बार्से, सेङ, दोगाडी, घुस्तुङ र सुनदह ब्लग छ । शिकारीले रोजेको ठाउँमा कम्पनीले शिकार गराउने गर्छन् ।
शिकारका लागि रुस, अमेरिका, क्यानाडा, नर्वे, जर्मनीलगायत देशबाट तालिमप्राप्त शिकारी ढोरपाटन आउने गरेका छन् । सौखिन र खर्चिला विदेशी शिकारीको रोजाइमा ढोरपाटन पर्ने गरेको छ ।
एउटै शिकारीले रु. ३० लाखदेखि रु ३५ लाखसम्म शिकारमा खर्चने गरेको बताइन्छ । शिकारी हेलिकप्टरबाट आरक्षमा पुग्ने गर्छन् ।
एक हजार ३२५ वर्ग किमिमा फैलिएको आरक्ष बागलुङ, म्याग्दी र रुकुमको पहाडी र हिमाली भू–भागमा अवस्थित छ । विभागले वर्षमा २० नाउर र ११ झारलको शिकार कोटा छुट्टयाउने गरेको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ ।